के हुँदैछ नयाँ शक्तिको पोखरा बैठकमा ? | mulkhabar.com
के हुँदैछ नयाँ शक्तिको पोखरा बैठकमा ?
January 4, 2018 | 9:58 am 85 Hits
निर्वाचनमा अपेक्षीत परिणाम ल्याउन नसकेपछि नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले पोखरामा केन्द्रीय समितको बैठकमा विहंगम छलफल गरेको छ । निर्वाचनको समिक्षा गर्न आयोजना गरिएको बैठकमा आगामि दिनको राजनीतिक यात्रा तय गर्ने गरी योजना निर्माण गर्ने बताइएको छ । बैठकमा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने निर्णय नगरे आफूहरुले अलग ढंगले सोच्ने बताए । संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी एकताको लागि प्रचण्डसँग छलफल अगाडि बढाउन बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले दबाब दिएका छन् । चुनावको अगाडि भएको वाम गठबन्धबाट बाहिरिएसँगै नयाँ शक्तिमा दुई धार देखिएको थियो । अधिकांश नेताहरुले वामपन्थीसँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । गठबन्धनबाट भट्टराई पछी हटेपछि नयाँ शक्तिका नेता र उम्मेदवारहरुले पार्टी परित्याग गर्दै माओवादी केन्द्र र एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
वाम ध्रुबिकरणको विपक्षमा गएको भन्दै चुनाव अगाडि संगठन विभाग प्रमु्ख देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा हजारौं नेता–कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रसँग ध्रुविकरण भएका थिए । जारी बैठकले पार्टी एकताको लागि ठोस निर्णय नगरे फेरि त्यही स्तरको विभाजन हुने स्रोतको दाबी छ । देशभरबाट कार्यकर्ताको दवावपछि डा. भट्टराईले केही दिन पहिलेमात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका थिए ।
भेटमा प्रचण्ड र डा. भट्टराईबीच तत्कालिक र दिर्घकालिक रुपमा सहकार्य र एकताको विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।